Seddex Qeybood 4 Duufaano Ku Dhuftey Badweynta Baasifigga Isku Waqti | Saadaasha Shabakadda
Waa markii ugu horreysay tan iyo markii ay jiraan diiwaanno saadaasha hawada saddex duufaanno loo calaamadeeyay sida qaybta 4-aad oo loo sameeyay isla goobta.
Badweynta Baasifigga ayaa markhaati ka ahaa sida ay u soo ifbaxday dhacdo aan caadi ahayn oo aan waligeed ka dhicin meel dunida ka mid ah oo ay saddex duufaano is qabsadaan weyn.
Thanks to sawirada ay bixiso dayax gacmeedka NASA, waxaad arki kartaa isku dhaca ah saddex Duufaan 4 Badweynta Baasifigga. Duufaannada ayaa loogu magac daray Kilo, Ignacio iyo Jimena waxayna saf u galaan bartamaha Baasifiga. Sida ku cad sawirada, Duufaanta Kiilo waxay dhacdaa bariga bada waxayna keeneysaa dabeylo gaari kara 200 km / saacaddii. Duufaanta Ignacio waxay ku taal bartamaha, gaar ahaan 600 kiiloomitir Hawai. Xaaladdan oo kale, dabeylaha xoogga duufaantu waxay gaarayaan 220 kiilo mitir saacaddii.
Duufaanta Jimena waxay ku taal galbeedka Baasifigga dabaylkeeduna sidoo kale waxay gaarayaan 200 km / saacaddii. Sida laga soo xigtay saadaasha badankeeda, Jimena wuxuu usii dhowaan doonaa Hawaii toddobaadkan, taasoo sababi doonta roobab xoog leh iyo dabaylo duufaan wata oo aagga oo dhan ka socda.
Dhacdadan gebi ahaanba aan horay loo arag oo taariikhi ah waxay dhacdaa markii Badweynta Atlaantik Dhacdo kale ayaa sidoo kale dhaceysa oo soo jeedineysa dareenka khubarada. Duufaanta Fred waxay noqon doontaa duufaantii ugu horeysay ee ka gudubta Jasiiradaha Cape Verde, oo ah aag Afrika ah oo duufaanada kulaylaha badiyaa ay samaystaan ​​ka dibna ay gaaraan xoog duufaan markii ay wax dhacaan ilaa jasiiradaha Caribbean-ka.
Tixdan Dhacdooyinka saadaasha hawada sida laga soo xigtay khubarada badankood, waxay yihiin cawaaqib cad oo dhacdada ah waxaa qoray El Niño taas oo ku dhacday Koonfurta Ameerika, sababtoo ah kuleylka daran ee ka imanaya biyaha meelahaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Saddex duufaan oo ka tirsan Qeybta 4 ayaa hal mar ku garaacay Badweynta Baasifigga
La qabsashada dhirta ee isbeddelka cimilada